Cách khôi phục cài đặt gốc điện thoại Android cực đơn giản | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Cách khôi phục cài đặt gốc điện thoại Android cực đơn giản | Muasalebang in Muasalebang
Ukusetha kabusha ifoni njengasekuqaleni kuyindlela yokubuyisela ifoni esimweni sayo sasekuqaleni. Lesi sihloko sizokwabelana nawe ukuthi uzosethwa nini kabusha futhi sikuqondise ukuthi ungasetha kanjani kabusha kumafoni we-Samsung, Xiaomi, Oppo kalula kakhulu.
1 Udinga ukusetha kabusha nini ifoni yakho?
2 Amanothi lapho ubuyisela ifoni kumasethingi asefekthri
3 Ungakwenza kanjani ukusetha kabusha kwefekthri okulula kwe-Samsung
4 Imiyalo Yokusetha Kabusha amafoni e-Xiaomi
5 Ungayisetha kanjani kabusha i-Oppo
6 Setha kabusha i-OPPO, amafoni we-Realme
6.1 Buyisela kuzilungiselelo
6.2 Setha kabusha kanzima usebenzisa ukhiye oqinile
7 Setha kabusha ifoni ye-Xiaomi Redmi
7.1 Buyisela kuzilungiselelo
7.2 Setha kabusha kanzima usebenzisa ukhiye oqinile
8 Setha kabusha ifoni ye-Huawei
8.1 Buyisela ngezilungiselelo
8.2 Setha kabusha kanzima usebenzisa ukhiye oqinile
9 Setha kabusha ifoni ye-HTC
9.1 Buyisela kuzilungiselelo
9.2 Setha kabusha kanzima usebenzisa ukhiye oqinile
10 Setha kabusha ifoni yakho ye-Vivo
10.1 Buyisela kusuka kuzilungiselelo
10.2 Setha kabusha kanzima usebenzisa ukhiye oqinile
11 Setha kabusha ifoni ye-Vsmart
11.1 Buyisela kusuka kuzilungiselelo
11.2 Setha kabusha kanzima usebenzisa ukhiye oqinile
12 Setha kabusha ifoni ye-Asus
12.1 Buyisela kusuka kuzilungiselelo
12.2 Setha kabusha kanzima usebenzisa ukhiye oqinile
13 Setha kabusha ifoni ye-Motorola
13.1 Buyisela kusuka kuzilungiselelo
13.2 Setha kabusha kanzima usebenzisa ukhiye oqinile
14 Setha kabusha iselula
14.1 Buyisela kusuka kuzilungiselelo
14.2 Setha kabusha kanzima usebenzisa ukhiye oqinile
Udinga ukusetha kabusha nini ifoni yakho?
Uma usebenzisa ifoni, kuzoba nezikhathi lapho udinga ukusetha kabusha ukuze wenze ifoni isebenze kahle. Nazi izimo lapho udinga ukusetha kabusha ifoni yakho:
Uvamise ukuba nesimo lapho ifoni yakho ilenga futhi ibe yiqhwa, okwenza kube nzima ukuthi uyisebenzise.
Ngeshwa ulande uhlelo lokusebenza oludale ukuthi ifoni iphahlazeke.
Ufuna ukususa zonke izinhlelo zokusebenza nesofthiwe efonini yakho ongasayidingi.
Udinga ukuvuselela ifoni yakho njengoba yayinjalo ngenkathi uyithenga ukuze uyidayise noma uyibuyisele komunye.
Amanothi lapho ubuyisela ifoni kumasethingi asefekthri
Ngaphambi kokuqhubeka nokusetha kabusha ifoni yakho ye-Samsung, udinga ukuqaphela okulandelayo:
Ngemva kokusetha kabusha ifoni, ifoni yakho izoba njengentsha, okusho ukuthi idatha yakho, izithombe, amavidiyo, njll. izolahleka.
Udinga ukwenza isipele yonke idatha yakho ngaphambi kokwenza isipele ukuze uqinisekise ukuthi idatha ngeke ilahleke ngemva kokusetha kabusha.
Khumbula i-akhawunti yakho ye-akhawunti ye-Samsung, ukuze ngemva kokusetha kabusha ungene futhi efonini yakho.
Ukuqinisekisa ukuthi inqubo yokusetha kabusha ifoni ihamba kahle, ifoni yakho kufanele ibe nebhethri elingaphezu kuka-30%.
Ungakwenza kanjani ukusetha kabusha kwefekthri okulula kwe-Samsung
Isinyathelo 1: Okokuqala, wena Iya kokuthi Izilungiselelo kumafoni we-Samsung.
Isinyathelo sesi-2: Okulandelayo, uskrolela phansi futhi Khetha “Ukuphathwa Okujwayelekile” njengoba kuboniswe ngezansi.
Isinyathelo sesi-3: Umngane khetha “Setha kabusha” ukuze uqhubeke ukusetha kabusha ifoni ye-Samsung.
Isinyathelo sesi-4: Kunawo Khetha okuthi “Setha kabusha njengasekuqaleni”.
Isinyathelo sesi-5: Ekugcineni wena khetha “Setha kabusha” ukuqhubeka nenqubo yokusetha kabusha ifoni.
Imiyalo Yokusetha Kabusha amafoni e-Xiaomi
Isinyathelo 1: Ukusetha kabusha ifoni yakho ye-Xiaomi, kuqala wena Iya kokuthi Izilungiselelo futhi Khetha “Mayelana nefoni”.
Isinyathelo sesi-2: Kunawo Khetha okuthi “Factory Data Reset” futhi Khetha “Sula Yonke Idatha” iwukusetha kabusha ifoni ye-Xiaomi ngempumelelo.
Ungayisetha kanjani kabusha i-Oppo
Isinyathelo 1: Ukusetha kabusha ifoni ye-Oppo, wena Iya kokuthi Izilungiselelo futhi Khetha “Izilungiselelo Ezengeziwe”.
Isinyathelo sesi-2: Umngane khetha “Ikhophi yasenqolobaneni bese usetha kabusha”kunawo khetha “Sula yonke idatha (setha kabusha idivayisi)” ukusetha kabusha ifoni.
Isinyathelo sesi-3: Okulandelayo, wena Khetha “Sula Yonke Idatha” futhi Khetha “Sula Idatha” iwukuba usethe kabusha njengasekuqaleni ifoni ye-Oppo ngempumelelo.
Setha kabusha i-OPPO, amafoni we-Realme
Yenza ukusetha kabusha kwasembonini kumafoni we-Realme ne-OPPO, yenza lokhu okulandelayo:
Isinyathelo 1: Vula into Ukusetha > Chofoza entweni Izilungiselelo ezengeziwe.
Isinyathelo sesi-2: Bese, khetha into Yenza ikhophi yasenqolobaneni bese usetha kabusha > Chofoza into Setha kabusha kuzilungiselelo zasembonini.
Isinyathelo sesi-3: I-India Sula yonke idatha > Chofoza khetha Susa idatha Ukuze uqinisekise.
Setha kabusha kanzima usebenzisa ukhiye oqinile
Isinyathelo 1: Cindezela bese ubamba inkinobho yamandla + yehlisa ivolumu cishe imizuzwana emi-3-4, linda kuze kuvele uphawu lwe-Realme noma lwe-Oppo.
Qaphela: Esinyathelweni esilandelayo, usebenzisa izinkinobho zevolumu phezulu naphansi ukuhambisa izinketho bese ucindezela inkinobho yamandla ukuze ukhethe.
Isinyathelo sesi-2: Khetha ulimi ukusebenzisa ngesikhathi sokusetha kabusha > Khetha Sula Idatha.
Isinyathelo sesi-3: Okulandelayo, chofoza bese ubamba into Sula yonke idatha nohlelo lokusebenza olukhiphekayo ukusula idatha kumakhalekhukhwini.
Isinyathelo sesi-4: Chofoza okuthi KULUNGILE > Khetha KULUNGILE ukuze idatha isuswe.
Isinyathelo sesi-5: Chofoza okuthi khetha Qalisa kabusha inketho vumela ifoni iqalwe kabusha > Chofoza okuthi KULUNGILE.
Setha kabusha ifoni ye-Xiaomi Redmi
Ukwenza ukusetha kabusha kwasefekthri kwamafoni we-Xiaomi nochungechunge lwe-Redmi, ukwenza ngezindlela ezi-2:
Isinyathelo 1: Phuma ngemvume ku-akhawunti ye-Google ocingweni lwe-Xiaomi.
Yethula into Ukusetha > Chofoza khetha I-akhawunti nokuvumelanisa > Khetha okulandelayo Google > Chofoza Okulandelayo I-akhawunti ye-Gmail > Chofoza Engeza.
Isinyathelo sesi-2: Phuma ku-akhawunti ye-Mi.
Vula isigaba Ukusetha > Chofoza entweni I-akhawunti ye-Mi > Chofoza Phuma > Khetha Sula > Khetha Bamba > Kwenziwa Faka iphasiwedi ukuze uqinisekise > Chofoza okuthi KULUNGILE.
Isinyathelo sesi-3: Setha kabusha njengasekuqaleni.
Yethula into Ukusetha > Cindezela okuthi khetha Mayelana nefoni > Khetha okulandelayo Ukusetha kabusha idatha yasefekthri > Chofoza Susa yonke idatha.
Isinyathelo 1: Cindezela bamba inkinobho yamandla ukuze uvale amandla ifoni.
Isinyathelo sesi-2: Uma amandla ecishiwe, wena Cindezela futhi ubambe inkinobho yamandla ngesikhathi esifanayo futhi inkinobho yevolumu.
Isinyathelo sesi-3: Ukusebenzisa ukhiye ukwandisa, ukunciphisa ivolumu ku pheqela kokukhethwa kukho futhi inkinobho yamandla ukukhetha into Sula Idatha.
Isinyathelo sesi-4: Chofoza entweni Sula Yonke Idatha > Cindezela inkinobho yamandla ukuze ukhethe Qinisekisa.
Isinyathelo sesi-5: Linda kuze kuvele isixhumi esibonakalayo, bese uchofoza okuthi khetha Buyela kumenyu enkulu.
Isinyathelo 6: Chofoza Qalisa kabusha > Cindezela Qalisa kabusha kuSistimu bese ulinda ukuthi isistimu ilulame ngokuzenzakalelayo.
Setha kabusha ifoni ye-Huawei
Isinyathelo 1: Isigaba sokuqala Ukusetha > Chofoza entweni Uhlelo.
Isinyathelo sesi-2: Chofoza okuthi khetha Setha futhi > Khetha into elandelayo Setha kabusha kudatha yangempela.
Isinyathelo sesi-3: Chofoza entweni Setha kabusha ifoni.
Isinyathelo 1: Qhubeka nokucisha ifoni.
Isinyathelo sesi-2: Bamba phansi ukhiye . kanyekanye ivolumu phezulu futhi inkinobho yamandla kuze kuvele ilogo yeHuawei.
Isinyathelo sesi-3: Chofoza entweni elandelayo Sula idatha / Ukusetha kabusha kwasefekthri.
Isinyathelo sesi-4: Khetha Sula idatha / Ukusetha kabusha kwasefekthri kwaphinda lokho.
Isinyathelo sesi-5: Linda isikhashana ukuze ubuyisele ifoni yakho.
Isinyathelo sesi-6: Cindezela okuthi khetha Qala kabusha I-system yakho ukuze ifoni iqalwe kabusha.
Setha kabusha ifoni ye-HTC
Yenza ukusetha kabusha kwasekuqaleni kwefoni ngale ndlela elandelayo:
Isinyathelo 1: Vula into Ukusetha > Chofoza entweni Yenza ikhophi yasenqolobaneni futhi usethe kabusha.
Isinyathelo sesi-2: Khetha Setha kabusha izilungiselelo zefoni.
Isinyathelo sesi-3: Chofoza okulandelayo Sula yonke idatha > Chofoza okuthi KULUNGILE.
Isinyathelo 1: Vala ifoni.
Isinyathelo sesi-2: Cindezela bese ubamba kanyekanye inkinobho yevolumu phansi futhi inkinobho yamandla.
Isinyathelo sesi-3: Ngemva kwalokho, cindezela inkinobho yevolumu phezulu, phansi ukuze uthole inketho Setha kabusha njengasekuqaleni > Chofoza inkinobho yamandla Ukukhetha.
Setha kabusha ifoni yakho ye-Vivo
Yenza ukusetha kabusha kwasekuqaleni ocingweni ngale ndlela elandelayo:
Buyisela kusuka kuzilungiselelo
Vula into Ukusetha > Chofoza khetha Ezinye izilungiselelo noma Ukuphathwa Kwesistimu (kuya ngemodeli yefoni) > Chofoza Okulandelayo Yenza ikhophi yasenqolobaneni bese usetha kabusha > Chofoza entweni Sula yonke idatha > Chofoza khetha Setha kabusha ifoni.
Isinyathelo 1: Cindezela bese ubamba inkinobho yamandla ukuze uvale ifoni. Ngemva kwalokho, cindezela isikhathi eside inkinobho yevolumu yehla + phezulu kuze kube isixhumi esibonakalayo sokubuyisela.
Isinyathelo sesi-2: Chofoza ku- Sula idatha bese ukhetha okulandelayo Sula idatha kwaphinda lokho.
Isinyathelo sesi-3: Yenza faka ikhodi yokukhiya inombolo yefoni (uma ikhona).
Isinyathelo sesi-4: Ekugcineni, khetha Sula idatha kwenziwe.
Setha kabusha ifoni ye-Vsmart
Kumafoni e-Vsmart, wenza ukusetha kabusha kwefekthri kwefoni ngale ndlela elandelayo:
Isinyathelo 1: Chofoza ingxenye evulekile Faka kudivayisi > Chofoza khetha Uhlelo.
Isinyathelo sesi-2: Chofoza entweni Setha kabusha inketho > Khetha into Sula yonke idatha (setha kabusha idivayisi).
Isinyathelo sesi-3: Chofoza okuthi khetha Setha kabusha ifoni > Khetha into Susa yonke into.
Isinyathelo 1: Vala ifoni ngokuphelele.
Isinyathelo sesi-2: Yenza Cindezela futhi ubambe izinkinobho zevolumu phezulu naphansi ngesikhathi esifanayo kuze kube isikrini sefoni siveza igama elithi QALA ngokuluhlaza.
Isinyathelo sesi-3: Sebenzisa okhiye baphezulu naphansi ukuze uye entweni Imodi Yokubuyisela > Chofoza inkinobho Umthombo ukukhetha into Sula idatha / Ukusetha kabusha kwasefekthri.
Isinyathelo sesi-4: Khetha Yebo ukuqinisekisa > Khetha Qala kabusha I-system yakho ukuqala kabusha.
Setha kabusha ifoni ye-Asus
Isinyathelo 1: Vula into Ukusetha > Chofoza khetha Yenza ikhophi yasenqolobaneni bese usetha kabusha.
Isinyathelo sesi-2: Cindezela khetha into Ukusetha kabusha idatha yasefekthri.
Isinyathelo sesi-3: Khetha okulandelayo Faka kabusha idivayisi.
Isinyathelo 1: Cindezela inkinobho yamandla kuze kube yilapho icishwa ngokuphelele.
Isinyathelo sesi-2: Chofoza Okulandelayo inkinobho yevolumu phansi kanye nenkinobho yamandla Uma ifoni idlidliza, khulula lezi zinkinobho
Isinyathelo sesi-3: Sebenzisag inkinobho yevolumu yokwehlisa ukuze uqhubeke nomnyakazo Yiya endaweni yezinketho kubha yemenyu bese ucindezela inkinobho yamandla ukuze ukhethe Sula idatha / Ukusetha kabusha kwasefekthri > Cindezela qhubeka ukhethe Yebo.
Isinyathelo sesi-4: Chofoza okulandelayo Qala kabusha I-system yakho.
Setha kabusha ifoni ye-Motorola
Isinyathelo 1: Iya esigabeni Faka kudivayisi > Khetha into elandelayo Yenza ikhophi yasenqolobaneni bese usetha kabusha.
Isinyathelo sesi-2: Chofoza entweni Setha kabusha kudatha yangempela > Chofoza Okulandelayo Setha kabusha ifoni.
Isinyathelo sesi-3: Khetha Susa yonke into.
Isinyathelo 1: Cindezela inkinobho yamandla kuze kube yilapho ifoni icisha ngokuphelele.
Isinyathelo sesi-2: Cindezela bese ubamba izinkinobho zamandla nezevolumu phansi kuze kuvele isibuko Setha kabusha isixhumi esibonakalayo > Chofoza entweni Ukubuyisela.
Isinyathelo sesi-3: Sebenzisa inkinobho yevolumu phansi ukuze wehlise umugqa Sula idatha / Ukusetha kabusha kwasefekthri futhi cindezela inkinobho yamandla Ukuze uqinisekise.
Isinyathelo sesi-4: Qhubeka ucindezela ukhiye wevolumu phansi ukuze wehlele kunketho Yebo – susa yonke idatha yomsebenzisi futhi cindezela bese ubamba inkinobho yamandla futhi Ukuze uqinisekise.
Isinyathelo sesi-5: Linda inqubo yokubuyisela idivayisi cishe imizuzwana engama-30.
Isinyathelo sesi-6: Cindezela okulandelayo Qala kabusha I-system yakho ukuze idivayisi iqaliswe kabusha.
Setha kabusha iselula
Chofoza entweni Ukusetha > Cindezela okuthi khetha Yenza ikhophi yasenqolobaneni bese usetha kabusha > Chofoza Setha kabusha kudatha yangempela > Khetha okulandelayo Setha kabusha ifoni.
Isinyathelo 1: Vala ifoni ngokuphelele. Olandelayo, chofoza ivolumu phezulu ukuze uchofoze entweni Ukubuyisela
Isinyathelo sesi-2: Cindezela ubambe izinkinobho zevolumu phezulu naphansi ngesikhathi esifanayo ukunyakaza Iya kumenyu bese ucindezela inkinobho yamandla ukuze ukhethe into Sula idatha / Ukusetha kabusha kwasefekthri.
Isinyathelo sesi-3: Chofoza ukuze ukhethe into Yebo-susa yonke idatha yomsebenzisi.
Isinyathelo sesi-4: Chofoza okuthi khetha Qala kabusha I-system yakho.
Ngenhla kuneziyalezo zendlela yokusetha kabusha njengasekuqaleni amafoni e-Android kalula nje. Sethemba ukuthi lokhu kwabelana kuzokusiza ukuthi usebenzise ifoni yakho ngempumelelo kakhulu. Ngikufisela inhlanhla.
THENGA AMAFONI INANI ELIHLE KAKHULU!